အထီးကြွက် (2009) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံခံ၏ subpopulations အပေါ်စိတ်ကြွဆေးလုပ်ရပ်များ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
neuroscience ။ 2010 မတ်လ 31; 166 (3): 771-84 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2009.12.070 ။ EPub 2010 ဇန်နဝါရီ4။
Frohmader KS, Wiskerke J ကို, ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Lehman MN, Coolen LM.
ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ, ဆေးပညာနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ၏ Schulich ကျောင်း, အနောကျပိုငျးအွန်, လန်ဒန်တက္ကသိုလ် ON, ကနေဒါ, N6A 5C1 ဦးစီးဌာန။
စိတ်ကြွဆေး (meth) အလွန်စွဲလမ်းလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။ meth အလွဲသုံးစားမှုလေ့လိင်အန္တရာယ်အပြုအမူအလေ့အကျင့်များနှင့်လူ့ Immunodeficiency Virus ကိုတိုးပျံ့နှံ့နဲ့ဆက်စပ်နှင့် meth အသုံးပြုသူများအမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, arousal နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးသတင်းပို့ပါ။ နေသည် ဒီမူးယစ်လိင် Nexus များအတွက်ဇီဝအခြေခံမသိနိုင်ပါဘူး။ လက်ရှိလေ့လာမှုအထီးကြွက်များတွင် meth အုပ်ချုပ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သော mesolimbic စနစ်၏ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းပြသသည်။ အထူးသ meth နှင့်နျူကလိယအတွက်မိတ်လိုက် Co-Activate ဆဲလ် core နဲ့ခရုခွံ, basolateral amygdala နှင့် anterior cingulate cortex accumbens ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သရုပျဖျောကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိယုံကြည်ချက်မူးယစ်ဆေးဝါးများမတူဘဲအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပါသည်, သဘာဝစစ်ကူအဖြစ်အတူတူပင်ဆဲလ်ကိုသက်ဝင်နိုင်ပြီး, အလှည့်၌ဤသဘာဝကဆုလာဘ်များ compulsive ရှာသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
keywords: နျူကလိယ accumbens, basolateral amygdala, prefrontal cortex, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, မျိုးပွား, စွဲ
လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ် (ထို mesolimbic စနစ်, ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နျူကလိယ accumbens (NAc) ကတာဝန်ယူကြသည်ဦးနှောက်ဧရိယာတစ်ခုအပြန်အလှန်ကွန်ရက် basolateral amygdala တို့ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့် prefrontal cortex (mPFC) medial နေကြတယ်ကယ်လီ, 2004, Kalivas နှင့် Volkow, 2005) ။ အဆိုပါ mesolimbic စနစ်ကအလွဲသုံးစားမှုနှစ်ဦးစလုံးတ္ထုများတုန့်ပြန် activated ကြောင်းလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်di Chiara နှင့် Imperato, 1988, Chang et al ။ , 1997, Ranaldi et al ။ , 1999) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်သဘာဝကျကျကြိုးအပြုအမူတွေမှ (Fiorino et al ။ , 1997, Balfour et al ။ , 2004). အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အထူးသဖြင့်သုတ်ရည်လွှတ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်များမော်ဒယ်များအတွက်အလွန်အမင်းကြိုးများနှင့်အားဖြည့်ဖြစ်ပါသည် (Pfaus et al ။ , 2001). အထီးကြွက်သုတ်ရည်ထိဖို့ conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ဖွံ့ဖြိုး (Agmo နှင့် Berenfeld, 1990, Martinez နှင့်သိပ်မရှိပါဘူး, 2001, Tenk, 2008), နှင့်လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှအော်ပရေတာလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် (Everitt et al ။ , 1987, Everitt နှင့် Stacey, 1987) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးလည်းကြိုးများနှင့်အားဖြည့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တိရစ္ဆာန်များ (opiates, နီကိုတင်း, အရက်နှင့် psychostimulants အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတ္ထုများဖို့သင်ယူပါလိမ့်မယ်ပညာရှိ 1996, ပီယပ်နှင့် Kumaresan, 2006, Feltenstein နှင့်ကြည့်ရှု 2008) ။ ကအလွဲသုံးစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှစ်ခုစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ mesolimbic ဦးနှောက်ဧရိယာများကိုသက်ဝင်သိရသော်လည်း, ကအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုအတူတူပင်အာရုံခံသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းရှိမရှိလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
Electrophysiological လေ့လာမှုများအစားအစာနှင့်ကိုကင်းနှစ်ခုစလုံး NAc အတွက်အာရုံခံကိုသက်ဝင်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ သို့သော်နှစ်ဦးကိုစစ်ကူအတွက် NAc အတွင်းတူညီဆဲလ်တွေကိုသက်ဝင်ကြဘူး (Carelli et al ။ , 2000, Carelli နှင့် Wondolowski, 2003) ။ ကိုကင်းများကသွေးဆောင်နေကြသည်အဖြစ်ထိုမှတပါး, အစားအစာနှင့် sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေး (electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများ၏ရေရှည်ကိုပြောင်းလဲစေပါဘူးချန် et al ။ , 2008). ဆနျ့ကငျြ, သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုစုဆောင်းခြင်းအလွဲသုံးစားမှုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအမှန်ပင်တူညီသော mesolimbic အာရုံခံအပေါ်ပြုမူအံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ Psychostimulants နှင့် opioids အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးပြောင်းလဲ (မစ်ချယ်နှင့် Stewart က, 1990, Fiorino နှင့် Phillips က, 1999a, Fiorino နှင့် Phillips က, 1999b). ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေမကြာသေးမှီက data တွေကိုလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် D-စိတ်ကြွဆေးတစ် sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ထိခိုက်ဆုလာဘ်အမြင်အားဖြင့်သက်သေအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ psychostimulants ဖို့တုန့်ပြန်ပွောငျးလဲကြောင်းပြသ (အိုး et al ။ , 2009). အလားတူတုန့်ပြန်ယခင်ကအလွဲသုံးစားမှုစိတ်ကြွဆေးများသို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိထားသည် (လက်တ, 1989, Shippenberg နှင့် Heidbreder, 1995, Shippenberg et al ။ , 1996, Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000). အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်များအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်တုံ့ပြန်မှုအကြံပြုအဆိုပါ mesolimbic စနစ်အတူတူပင်အာရုံခံကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်တူညီတိရိစ္ဆာန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် mesolimbic စနစ်၏အာရုံကြော activation စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ psychostimulant, စိတ်ကြွဆေး (meth), ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုအာရုံခံအပေါ်တိုက်ရိုက်ပြုမူသောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
meth, ကမ္ဘာ့အများဆုံးနှိပ်စက်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (NIDA, 2006 တစ်ခုဖြစ်သည် Ellkashef et al ။ , 2008) နှင့်ကြိမ်မြောက်ကြောင့်မကြာခဏပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ meth အသုံးပြုသူများအမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ arousal အဖြစ်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးသတင်းပို့ (Semple et al ။ , 2002, Schilder et al ။ , 2005) ။ ထိုမှတပါး, meth အလွဲသုံးစားမှုလေ့လိင် compulsive အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Rawson et al ။ , 2002). အသုံးပြုသူများမကြာခဏမြောက်မြားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအသုံးပြုရန်လျော့နည်းများပါတယ်အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြ (Somlai et al ။ , 2003, Springer et al ။ , 2007) ။ သူတို့နေရာအတည်မပြုနိုင် Self-အစီရင်ခံစာများအပေါ်အားကိုးအဖြစ်ကံမကောင်းစွာပဲ meth လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတစ်ခုခန့်မှန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုညွှန်းလေ့လာမှုများ (ကန့်သတ်ထားပါသည်Elifson et al ။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့်, တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် meth-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများဆယ်လူလာအခြေခံပြီးသို့အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဤရှုပ်ထွေးမူးယစ်လိင် Nexus ကိုနားလည်ဘို့လိုအပ်ပါသည်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးများနှင့်အထူးသဖြင့် meth, ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြန်ဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံခံအပေါ်သို့ပြုမူစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းအထက်ပါဖော်ပြထားအထောက်အထားအမြင်တွင်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ psychostimulant meth ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်အာရုံကြော activation စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီလေ့လာမှုကအသီးသီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် meth အားဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းအာရုံကြော activation detect လုပ်ဖို့ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ Fos ၏ immunohistochemical visualization နှင့် phosphorylated မြေပုံ Kinase (အခွင့်အရေး) အသုံးချဖို့တစ် neuroanatomical technique ကိုအကောင်အထည်ဖော်။ Fos သာအာရုံခံဆဲလျ၏ activation ပြီးနောက်အကျယ်ချဲ့စကားရပ်အဆင့် 30-90 မိနစ်အတူဆဲလ်၏နျူကလီးယပ်စအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကဦးနှောက်ထဲမှာ Fos စကားရပ် induces ကြောင်းလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်Pfaus နှင့် Heeb, 1997, Veening နှင့် Coolen, 1998), အ mesocorticolimbic system အပါအဝင် (Robertson က et al ။ , 1991, Balfour et al ။ , 2004). အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး mesocorticolimbic သည့်စနစ်အတွင်းအခွင့်အရေးစကားရပ်သွေးဆောင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ် (Valjent et al ။ , 2000, Valjent et al ။ , 2004, Valjent et al ။ , 2005) ။ Fos ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမှမတူဘဲ, ERK ၏ phosphorylation တစ်ဦးမြင့်မားတဲ့ dynamic ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသာအာရုံခံ activation ပြီးနောက် 5-20 မိနစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Fos နှင့်အခွင့်အရေးများ၏ကွဲပြားယာယီ profile များကိုသူတို့ကိုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နောက်ဆက်တွဲအာရုံခံ activation များအတွက်အမှတ်အသားများ၏စံပြ set ကိုမှန်ကန်စေသည်။
ချားလ်စ်မြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း (Montreal, QC, ကနေဒါ) မှရရှိသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague Dawley ကြွက် (210-225 ဆ) စံ plexiglas အိတ်များ (အိမ်မှာအိတ်များ) တွင်လှောင်အိမ်နှုန်းနှစ်ခုသျောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်အခန်းတစ်ခန်းတစ် 12 / 12 ဇမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် (10.00 ဇရက်ပယ်ထွန်း) အလင်းသံသရာကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ အစားအစာနှင့်ရေရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum ။ အားလုံးစမ်းသပ်မှိန်အနီရောင် illumination အောက်မှာအမှောင်အဆင့်၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အသုံးပြု stimulus အမျိုးသမီးနက်ရှိုင်းသောမေ့ဆေးအောက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသ ovariectomized ခဲ့ကြသည် (13 / ကီလိုဂရမ် ketamine နှင့် 87 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် xylazine mg) နှင့် 5% estradiol benzoate (eb) နှင့် 95% လက်စထရောင်တစ်ဦးအရေပြားအောက်ဆုံး implants ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ကြိုတင်စမ်းသပ်ဖို့ 500 ml ကိုနှမ်းရေနံ 0.1 ဇအတွက်4μgအဓိကချို့ယွင်း၏အရေပြားအောက်ဆုံး (SC) အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးအနောက်တိုင်းအွန်တက္ကသိုလ်မှာတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုကော်မတီကအတည်ပြုခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ကနေဒါကောင်စီကဖော်ပြထားသည့်လမ်းညွှန်ချက်များပေးရန်ညီခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်ချက် 1 နှင့် 2: အမျိုးသားကြွက် (ဎ = 37) တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ် (E) နဲ့တစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူသို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်နှစ်ကြိမ်ငါးခုစဉ်အတွင်းစင်ကြယ်သောစမ်းသပ်မှုအိတ်များ (30 × 60 × 45 စင်တီမီတာ) တွင်ပထမဦးဆုံးလာသော 50 မိ, အဘို့မိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံရဖို့ရန်, -weekly Pre-စမ်းသပ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ။ အဆုံးစွန်သောနှစ်ခုအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးကိုစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဘောင်အပါအဝင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်:;, intromission အောင်းနေချိန် (IL အောင်းနေချိန် (ပထမတောင်ပေါ်မှာအထိအမျိုးသမီး၏နိဒါန်းအနေဖြင့်အချိန် ML); mount အမျိုးသမီး၏နိဒါန်းအနေဖြင့်အချိန်ကိုပထမဦးဆုံးနှင့်အတူ mount သည်အထိ အင်္ဂါဇာတ်ထိုးဖောက်မှု), သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် (EL; ပထမဦးဆုံး intromission ကနေသုတ်ရည်လွှတ်ဖို့အချိန်), post ကိုသုတ်ရည်လွှတ်ကြားကာလ (pei; သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှပထမဦးဆုံးနောက်ဆက်တွဲ intromission ဖို့အချိန်) တောင်ပေါ်၏, နံပါတ် (M) နဲ့ intromissions အရေအတွက် (IM) (Agmo, 1997) ။ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ဆေးထိုးဖို့လေ့အဘို့စမ်းသပ်နေ့မတိုင်မီ 1 ရက်ဆက်တိုက်, အားလုံးယောက်ျား 0.9% NaCl (SC ဆား) ၏3ml / ကီလိုဂရမ်နေ့စဉ်ဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်နေ့မှာတော့စမ်းသပ်မှုနေ့ကမတိုင်မီအားလုံးယောက်ျားတစ်ခုတည်း House ခဲ့ကြသည်။ အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျားအတွက်, Fos ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်နွယ်သောအခြေအနေများ Contextual တွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ် (Balfour et al, 2004) ။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းအားလုံးမိတ်လိုက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုထိန်းသိမ်းရေးအတွက် unmated ထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားအတွက်အေးစက်-cue သွေးဆောင် activation ကာကွယ်တားဆီးဖို့ (ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Conditions တွေကိုရှောင်ရှား) ကိုအိမ်မှာလှောင်အိမ်ထဲမှာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အထီးကနောက်ဆုံးနှစ်ခုမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ (Data ပြမဟုတ်) ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမဆိုအတိုင်းအတာထဲမှာကွာခြားမရှစ်စမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ကာလအတွင်းယောက်ျားဖြစ်စေသူတို့တစ်သုတ်ရည်လွှတ် (လိင်) ပြသသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးအဖော် (မျှလိင်) မခံမယူခဲ့ပါဘူးသည်အထိမိမိတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံးယောက်ျားမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos-ထုတ်ဖော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့ခွင့်ပြုပါရန်အဖော်ရှာစတင်ခြင်းအောက်ပါ 60 မိနစ် perfused ခဲ့ကြသည် mated ။ အထီး4(စမ်းသပ်မှု 1) သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် phosphorylation ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကြိုတင် perfusion မှ4(စမ်းသပ်မှု 10) မိနစ်, ဖြစ်စေ, (တစ်ဦးချင်းစီဎ = 1) / ကီလိုဂရမ် meth သို့မဟုတ် 15 ml / ကီလိုဂရမ် MG ဆား (SC)2တစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိ MAP kinase ၏။ perfusion မတိုင်မီသောက်သုံးသောနှင့်အချိန် (ယခင်အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်Choe et al ။ , 2002, Choe နှင့်ဝမ်, 2002, Chen နှင့် Chen က 2004, Mizoguchi et al ။ , 2004, Ishikawa et al ။ , 2006) ။ ထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုများမိတ်မယောက်ျားပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ကြိုတင် meth 10 (ဎ = 7) သို့မဟုတ် 15 (ဎ = 5) မိနစ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ကြိုတင်, ဒါမှမဟုတ်ဆားထိုး 10 (ဎ = 5) သို့မဟုတ် 15 (ဎ = 4) မိနစ်လက်ခံရရှိ ။ ယဇျပူဇျောအပြီးတွင်ဦးနှောက် immunohistochemistry များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 3: meth ၏မြင့်မားထိုးကတည်းကတစ်ဦးအပိုဆောင်း neuroanatomical စမ်းသပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် meth တစ်အောက်ပိုင်းထိုးအာရုံကြော activation ထပ်၏ထိုးမှီခိုပုံစံများသွေးဆောင်လျှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်, စမ်းသပ်မှု 1 နှင့်2အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကစမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2အဖြစ်တူညီထုံးစံ၌ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအပေါ်, mated နှင့် unmated အုပ်စုများ (ဎ =6တစ်ခုချင်းစီ) 1 / ကီလိုဂရမ် meth (SC) ယဇ်ကိုပူဇော်ဖို့ကြိုတင် 15 မိ MG ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 4: အာရုံကြော activation လိင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှင့် meth meth များအတွက်တိကျသောလျှင်စမ်းသပ်ဖို့, ဒီစမ်းသပ်မှုအာရုံကြော activation ထပ်အလားတူပုံစံများဟာ psychostimulant ဃ-စိတ်ကြွဆေး (Amph) နှင့်မြင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2အဖြစ်တူညီထုံးစံ၌ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအပေါ်, အထီး Amph (5 / ကီလိုဂရမ် mg) သို့မဟုတ်ဆား (1 / ကီလိုဂရမ် mg) (SC) 15 မိယဇျပူဇျောကြိုတင် (ဎ =5တစ်ခုချင်းစီ) ဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်ရေး unmated အထီးဆားသို့မဟုတ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ကြိုတင် Amph 15 မိနစ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ချက် 1-4 အတွက်အသုံးပြုသွားမည်စမ်းသပ်အုပ်စုများခြုံငုံသုံးသပ်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် စားပွဲတင် 1.
စမ်းသပ်ဆဲအုပ်စုများခြုံငုံသုံးသပ်ချက်စမ်းသပ်ချက် 1-4 တွင်ထည့်သွင်း။
နှင့် 270 M ကဖော့စဖိတ်ကြားခံ (PB) တွင်5ml ကို 500% paraformaldehyde အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဆား၏4ml နှင့်အတူ transcardially perfused; တိရစ္ဆာန်များ (ip 0.1 ကီလိုဂရမ် / mg) pentobarbital နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ထို့နောက် 1 M က PB အတွက် 20% sucrose နှင့် 0.01% ဆိုဒီယမ် Azide ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ခြင်းနှင့် 0.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား, တူညီတဲ့ fixative အတွက်အခန်းအပူချိန်မှာဖယ်ရှားခြင်းနှင့်4ဇများအတွက် Post-fixed ခဲ့ကြသည်။ မှု Coronal အပိုင်း (35 μm) နောက်ထပ်သည်အထိတစ်ဦးအေးခဲနေသော microtome (H400R, Micron, ဂျာမနီ) မှာဖြတ် cryoprotectant ဖြေရှင်းချက်လေးအပြိုင်စီးရီး (30% sucrose နှင့် 30 M က PB အတွက် 0.1% Ethylene glycol) တွင်စုဆောင်း 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည် လုပ်ဆောင်နေသည်။
အားလုံးပေါက်ဖွားနူးညံ့သိမ်မွေ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအခန်းအပူချိန်မှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အခမဲ့ floating ကဏ္ဍများပေါက်ဖွားအကြား 0.1 M ကဖော့စဖိတ်-buffered ဆား (PBS) နဲ့ကျယ်ပြန့်ကိုဆေးကြောခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ 1% H ကိုနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်2O2 10 မိဘို့, ထို့နောက် 0.1 ဇများအတွက် (PBS 0.4% bovine သွေးရည်ကြည် albumin နှင့် 100% ထရီ X-1 ်) ပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက်ထဲမှာပိတ်ဆို့။
အခွင့်အရေး / Fos
တစ်ဦးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, တစ်သျှူး p42 နှင့် p44 မြေပုံ kinases ERK1 နှင့် ERK2 (1 စမ်းသပ်မှု 400 နှင့် 1 တွေအများကြီး 19;; ဆဲလ် signal ကြောင် # 1;:; 4.000 စမ်းသပ်မှု2တွေအများကြီး321 9101 အခွင့်အရေး) ဆန့်ကျင်နေတဲ့ယုန် polyclonal antibody ကိုနှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည် နှင့် avidin-horseradish peroxidase ရှုပ်ထွေးသော (; 1; Vector Laboratories, Burlingame,, CA ABC ရုပ်သံ Elite 1);: biotinylated မြည်း Anti-ယုန် IgG (Jackson က Immunoresearch Laboratories, အနောက် Grove, PA ဆိုပြီး 500 1) နဲ့ 1000 ဇ Incubator ။ ထို့နောက်တစ်သျှူး BT (biotinylated tyramide နှင့်အတူ 10 မိဘို့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးရ၏ 1: 250 PBS အတွက် + 0.003% H ကို2O2; မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် Immunoresearch Laboratories, အနောက် Grove, PA); 30: Alexa 488 conjugation strepavidin (1 နှင့်အတူ Tyramid Signal Amplification Kit, NEN ဘဝကသိပ္ပံဘော်စတွန်, MA) နှင့် 100 မိသည်။ (:; SC-1; Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA 500 52), ဆိတ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် Alexa 30 (555 အတူ 1 မိပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်: Next ကို, တစ်ရှူးက c-Fos ဆန့်ကျင်နေတဲ့ယုန် polyclonal antibody ကိုနှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည် 200; Jackson က Immunoresearch Laboratories, အနောက် Grove, PA) ။ အစွန်းအထင်းကိုအောက်ပါခြင်း, အပိုင်း ddH အတွက် 0.1% gelatin နှင့်အတူဖန်ဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထား, 0.3 M က PB အတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောခဲ့သည်20 နဲ့ anti-နွမ်းအေးဂျင့် 1,4-diazabicyclo (2,2) ကထုတ်တဲ့ (DABCO; 50 / ml, Sigma-Aldrich, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို mg) ပါဝင်တဲ့အလတ်စား (Gelvatol) mounting တစ်ခု aqueous နှင့်အတူ coverslipped ။ Immunohistochemical ထိန်းချုပ်မှုသင့်လျော်သောလှိုင်းအလျားအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏မရှိခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးမူလတန်းပဋိ၏ပျက်ကွက်ပါဝင်သည်။
လေးယောက်စလုံးစမ်းသပ်ချက်အဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဘောင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့မှတျတမျးတငျထားနှင့်ကှဲလှဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်နေ့တာအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏ parameters များကိုမဆိုအတွက်အုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။
အခွင့်အရေး / Fos ဆဲလ်အရေအတွက်
လူပျိုနှင့် Fos နှင့်အခွင့်အရေးများအတွက်ဆဲလ် NAc core နဲ့ shell ကိုငျဒသေ၏ caudal အဆင့်ဆင့်အတွက်ရေတွက်ခဲ့ကြတံဆိပ်ကပ် dual-, basolateral amygdala (BLA), posterodorsal medial amygdala (MEApd), ဗဟို amygdala (CeA), medial preoptic နျူကလိယ (MPN), posteromedial နှင့် အဆိုပါ stria terminalis (BNSTpm နှင့် BNSTpl) ၏ posterolateral အိပ်ရာနျူကလိယကို၎င်း, anterior cingulated ဧရိယာ (ACA), prelimbic (PL), နှင့် mPFC ၏ infralimbic (IL) မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း။ ပုံရိပ်တွေအားလုံးဘာသာရပ်များ (500x ရည်ရွယ်ချက်များကို အသုံးပြု. ) အတွက်ပုံသေကင်မရာဆက်တင်များနှင့်အတူတစ်ဦး Leica ဏု (DM10B, Leica Microsystems ကို, Wetzlar, ဂျာမနီ) နှင့် Neurolucida software ကို (MicroBrightfield Inc မှ) တွဲနေတဲ့အအေး CCD ကင်မရာ (Microfire, Optronics) ကိုသုံးပြီးဖမ်းမိခဲ့သည်။ neurolucida ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဒေသများ (အထင်ကရအဆောက်အအပေါ်အခြေခံပြီးသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်Swanson, 1998) တစ်ဦးချင်းစီကဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ထူးခြားသော (ကြည့်ရှု ပုံ 1) ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစံဒေသများ NAc core နဲ့ shell ကို မှလွဲ. အားလုံးဒေသများရှိအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆုံးစွန်သောဒေသများရှိ, အခွင့်အရေးနဲ့ Fos စကားရပ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းမဟုတ်ခဲ့နဲ့ patch ကို-တူသောပုံစံများအတွက်ထင်ရှား။ , ထို့ကြောင့်တစ်ခုလုံးကို core နဲ့ shell ကိုအထင်ကရအဆောက်အ (နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle, anterior commisure နှင့် Calleja ၏ကျွန်းများ) အပေါ်အခြေခံပြီးဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအဆိုပါဒေသများစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားနှင့် 1.3 မီလီမီတာခဲ့ကြသည်ဘူး2 အဆိုပါ NAc core နဲ့ shell ကိုပါ။ ကျန်ရှိသောဒေသများများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစံဒေသများဖြစ်ကြသည်: 1.6 မီလီမီတာ2 အဆိုပါ BLA, 2.5 နှင့် 2.25 မီလီမီတာအတွက်2 အဆိုပါ MEApd နှင့် CeA အတွက်အသီးသီး 1.0 မီလီမီတာ2 အဆိုပါ MPN, 1.25 မီလီမီတာအတွက်2 အဆိုပါ BNST နှင့် mPFC ငျဒသေများနှင့် 3.15 မီလီမီတာအတွက်2 အဆိုပါ VTA ၌တည်၏။ နှစ်ဦးအားပုဒ်မတိရိစ္ဆာန်နှုန်းအသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသရေတွက်ခဲ့ကြနှင့် Fos အမှတ်အသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းအခွင့်အရေးဆဲလ်များ၏အခွင့်အရေးနှင့် Fos ဘို့တစ်ခုတည်းနှင့် dual-label တပ်ထားသောဆဲလ်အရေအတွက်အဖြစ်ရာခိုင်နှုန်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အဘို့နှင့် Fisher ရဲ့ LSD: စမ်းသပ်ချက် 1,2နှင့်4အဘို့, အုပ်စုတစ်စုပျမ်းမျှနှစ်ခုလမ်း ANOVA (မိတ်လိုက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်များ) ကို အသုံးပြု. နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် post ကို hoc 0.05 တစ်အရေးပါမှုအဆင့်မှာနှိုင်းယှဉ်။ စမ်းသပ်မှု3အဘို့, အုပ်စုတစ်စုပျမ်းမျှ 0.05 တစ်အရေးပါမှုအဆင့်မှာ unpaired t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဦးနှောက်ဒေသများသရုပ်ဖော်သိထား drawings နဲ့ပုံရိပ်တွေ။ ညွှန်ပြခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဒေသများအသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ထူးခြားသောအမှတ်အသားများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့စမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားနှင့် 1.25 မီလီမီတာခဲ့ကြသည်ဘူး2 mPFC ငျဒသေ (က), 1.3 မီလီမီတာအတွက်2 ထဲမှာ ...
အဘို့အဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကို ပုံ3CCD ကင်မရာ (DFC 340FX, Leica) တစ်ဦး Leica ဏု (DM500B) မှပူးတွဲပါနဲ့ Adobe က Photoshop ကို 9.0 software ကို (Adobe Systems, San Jose,, CA) သို့တင်သွင်းခဲ့ကြသည်ကို အသုံးပြု. ဖမ်းယူခဲ့သည်။ ပုံရိပ်တွေတောက်ပ၏ညှိနှိုင်းမှု မှလွဲ. မည်သည့်လမ်းအတွက်ပြောင်းလဲမခံခဲ့ရပါ။
လိင် + Sal (က, ခ, ဂ) အဘယ်သူမျှမ:; နှင့်အခွင့်အရေး (အစိမ်းရောင်ခ, အီး, ဇ, ဋ) တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စု၏တိရစ္ဆာန်များ၏; NAc အပိုင်းကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ Fos (က, ဃ, ဆ, ညအနီရောင်) အတွက် immunostained , လိင် + Sal (ဃ, င, f), အဘယ်သူမျှမလိင် + meth (ဆ, ဇ, ဈ), နှင့်လိင် + meth (ည, ဋ, ဌ) ။ ညာဘက်ပြားများမှာ ...
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့် Limbic System နဲ့ meth အုပ်ချုပ်ရေး၏အာရုံကြော Activation
စမ်းသပ်မှု 1: အ MPN, BNSTpm, NAc core နဲ့ shell ကိုထင်ရှားမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ကြိုတင် meth 10 မိနစ်လက်ခံရရှိကြောင်းယောက်ျားအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos နှင့် meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေးဘို့တစ်ခုတည်းနှင့် dual-label တပ်ထားသောဆဲလ်အားသုံးသပ်ခြင်း, BLA, VTA, ဤဒေသများအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos စကားရပ်သရုပ်ပြကြိုတင်လေ့လာမှုများ (နှင့်ကိုက်ညီ mPFC ၏အပေါင်းတို့နှင့်ငျဒသေ,Baum နှင့် Everitt, 1992, Pfaus နှင့် Heeb, 1997, Veening နှင့် Coolen, 1998, Hull et al ။ , 1999) ။ အခြားအ psychostimulants အားဖြင့်သွေးဆောင် activation ပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီသွေးဆောင် NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက်အခွင့်အရေး, BLA, MeApd, CeA, BNSTpl နှင့် mPFC ၏ဒေသများတွင်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ကြိုတင် meth အုပ်ချုပ်ရေး 10 မိနစ်, (Valjent et al ။ , 2000, Valjent et al ။ , 2004, Valjent et al ။ , 2005).
ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် meth အားဖြင့်အာရုံကြော activation ပူးတွဲထုတ်ဖော်သုံးပုံစံများလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်: လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကို non-ထပ်အာရုံကြောလူဦးရေ activated ရှိရာပထမဦးစွာဦးနှောက်ဧရိယာများ (ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြစားပွဲတင် 2) ။ အထူးသဖြင့် CeA, MEApd, BNSTpl နှင့် mPFC တို့တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲစေသည့် pERK (F (1,16) = 7.39-48.8; p = 0.015- <0.001) နှင့်လိင် - သွေးဆောင် Fos (F (1,16)) တွင်သိသာစွာတိုးများလာသည်။ 16.53) = 158.83-0.001; p <1,16) လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤဒေသများရှိမိတ်လိုက် Meth- ကုသအထီးအတွက် dual- တံဆိပ်ကပ် neuron အတွက်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာတိုးရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာ MEApd ဖြစ်သည်။ ထိုတွင်အမှတ်အသားပြုထားသောဆဲလ်အရေအတွက်နှစ်ခုကိုမိတ်လိုက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (F (9.991) = 0.006; p = XNUMX) ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလုံး ၀ မရှိခြင်းနှင့် Meth ကုသသည့်အုပ်စုများတွင်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းသည်ဆားငန်ကုသသောအုပ်စုများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခြင်းမရှိသောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်မဟုတ်ပါ (စားပွဲတင် 2) ။ အာရုံကြော activation သာအဖော်ရှာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ရာဒုတိယ, ဦးနှောက်ဧရိယာများ (ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြစားပွဲတင် 3) ။ အထူးသဖြင့် MPN, BNSTpm နှင့် VTA သာမိတ်လိုက်နေဖြင့် activated နှင့်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos (F (1,16) = 14.99-248.99; p ≤ 0.001) တွင်သိသာထင်ရှားသောတိုးပါရှိသောခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေး။
လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကို non-ထပ်အာရုံကြောလူဦးရေကိုသက်ဝင်ဘယ်မှာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos နှင့် meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေးထုတ်ဖော်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။
မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos ၏အကျဉ်းချုပ်နှင့်အာရုံကြော activation သာမိတ်လိုက်နေဖြင့်သွေးဆောင်ရာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေးစကားရပ်။
လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများတွင် neuron ၏ထပ်လူဦးရေ activated ဘယ်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာများ (တွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ2နှင့် and3) .3) ။ NAc ၏အဓိကနှင့်အခွံ၊ BLA နှင့် ACA တို့တွင်မိတ်လိုက်ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများ (F (1,16) = 7.87-48.43; p = 0.013- <0.001) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု (F (1,16) = 6.39-) နှစ် ဦး စလုံးဖော်ပြဆဲလ်နံပါတ်များအပေါ် 52.68; p = 0.022- <0.001) အဖြစ်ဤအချက်နှစ်ချက် (F (1,16) = 5.082-47.27; p = 0.04- <0.001; ACA အတွက်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအပြန်အလှန်) အကြားအပြန်အလှန်။ မိတ်လိုက် - သွေးဆောင် Fos နှင့် Meth- သွေးဆောင် pERK ။ Post-hoc ဆန်းစစ်ချက်အရ dual-labeled neuron အရေအတွက်သည်မိတ်လိုက်သည့် Meth- ထိုးဆေးများအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (p = 0.027- <0.001), သို့မဟုတ် mated saline-ကုသ (p = 0.001- <0.001) အထီးများ။ပုံ2နှင့် and3) .3) ။ ဒေတာမူးယစ်ဆေး-activated အာရုံခံ၏ရာခိုင်နှုန်း, အ NAc core ကိုအတွက် 39.2 ± 5.3% အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်တဲ့အခါမှာ ACA တွင် neuron များ၏ NAc shell ကို, အ BLA အတွက် 39.2 ± 5.8% နှင့် 40.9 ± 6.3% တို့က activated ခဲ့ကြသည်အတွက် 50.0 5.3% ± မိတ်လိုက်နှင့် meth နှစ်ဦးစလုံး။
10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် meth ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပါလိင်-သွေးဆောင် Fos နှင့် meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေး NAc, BLA အတွက်စကားရပ်နှင့် ACA တွင် neuron4မိ။ Fos ၏ sem (က, ဃ, ဆ, ည) ± mean နံပါတ်များ NAc core ကိုအတွက်အခွင့်အရေး (ခ, အီး, ဇ, ဋ), နှင့် dual-(ဂ, f, ဈ, ဌ) တံဆိပ်ကပ်ဆဲလ် (က, ...
မျှော်လင့်မထားသောလေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေးထိခိုက်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ meth သိသိသာသာ mated နှင့် unmated meth-ထိုးသွင်းအုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အခွင့်အရေးအဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်ပေမယ့် unmated meth-ထိုးသွင်းယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ, NAc, BLA နှင့် ACA အတွက်အခွင့်အရေးတံဆိပ်ကပ်အိမ်ထောင်ဖက် meth-ထိုးသွင်းယောက်ျားအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ (ပုံ 2b, အီး, ဇ, ဋ; p = 0.017- <0.001) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတူတူပင်အာရုံခံအပေါ်ပြုမူဒါပေမယ့်လည်းအလှည့်အကြောင်းမရှိအတွက် meth မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲကြောင်းမူးယစ်ဆေးလွှာမှသို့မဟုတ်ဇီဝြဖစ်အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ၏ညွှန်ပြစေခြင်းငှါ၎င်းယူဆချက်ကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် activation တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောယာယီပုံစံဖြစ်ပေါ်စေသည်လျှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, NAc, BLA နှင့် ACA ၏ကဏ္ဍများကိုအထီးအဘို့အစွန်းခဲ့ကြသည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (စမ်းသပ်မှု 15) အောက်ပါနောက်ပိုင်းအချိန်အမှတ် (2 မိနစ်) မှာယဇ်ပူဇော်ကြ၏။
စမ်းသပ်မှု 2: တစ်ခုတည်းနှင့် dual-label တပ်ထားသောဆဲလ်အားသုံးသပ်ခြင်းကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် meth 15 မိနစ်နောက်ဆက်တွဲထိတွေ့အထက်ဖော်ပြထားတဲ့တွေ့ရှိချက်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ကြိုတင် Fos နှင့်အခွင့်အရေးအတွက် NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက် immunolabeling, BLA နှင့် ACA ၏သိသာထင်ရှားသောတိုးအတွက်ရလဒ်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos နှင့် meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေး၏သိသာထင်ရှားသော Co-expression ကိုနောက်တဖန် (ဤဒေသများအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ 4; မိတ်လိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: F ကို (1,12) = 15.93-76.62; p = 0.002- <0.001; မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှု: F ကို (1,12) = 14.11-54.41; p = 0.003- <0.001) ။ မိတ်လိုက် Meth- ထိုးသွင်းယောက်ျားအတွက် dual- တံဆိပ်ကပ်အာရုံခံအရေအတွက် unmated Meth- ကုသ (p <0.001) သို့မဟုတ် mated ဆား - ကုသ (p <0.001) အထီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အချက်အလက်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်သက်ဆိုင်သောအာရုံခံဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအခါ ၄၇.၂ ± ၅.၄% (NAc core)၊ ၄၂.၇ - ၇.၆% (NAc shell)၊ ၃၆.၇ - ၃.၇% (BLA) နှင့် ၅၉.၅ - ၅.၁% (ACA) - အာရုံကြောဆဲလ်များကိုဖော်ပြခြင်း မိတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်လည်း Meth အားဖြင့် activated ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှတစ်ဆင့် pERK သည်မိတ်လိုက်သောတိရစ္ဆာန်များနှင့်ဓာတ်မတည့်သောတိရစ္ဆာန်များနှင့်မတူပါ။ပုံ 4b, အီး, ဇ, ဋ), အ ACA (p <0.001) မှလွဲ။ အားလုံးဒေသများရှိ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမှန်အားဖြင့် Meth အားဖြင့် pERK သော induction ၏ယာယီပုံစံတစ်ခုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေကြောင်းညွှန်ပြ။
15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် meth ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပါလိင်-သွေးဆောင် Fos နှင့် meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေး NAc, BLA အတွက်စကားရပ်နှင့် ACA တွင် neuron4မိ။ Fos ၏ sem (က, ဃ, ဆ, ည) ± mean နံပါတ်များ NAc core ကိုအတွက်အခွင့်အရေး (ခ, အီး, ဇ, ဋ), နှင့် dual-(ဂ, f, ဈ, ဌ) တံဆိပ်ကပ်ဆဲလ် (က, ...
အာရုံကြော Activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် 1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် meth အောက်ပါ
ဤရွေ့ကား, ရလဒ်များကိုကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထင်ရှားနှင့်4/ ကီလိုဂရမ် meth အဆိုပါ NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက်အာရုံခံ၏ထပ်လူဦးရေ activated, BLA နှင့် ACA MG ။ T ကဏ activation ၌ဤထပ်တူအပေါ်မူးယစ်ဆေး-သောက်သုံးသော၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, အာရုံကြော activation ၏ပုံစံများလည်း meth တစ်အောက်ပိုင်းထိုးသုံးပြီးလေ့လာခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ NAc core နဲ့ခရုခွံ, BLA နှင့် ACA လိင်နှင့် meth အားဖြင့်သွေးဆောင် activation များအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် meth မှနောက်ဆက်တွဲထိတွေ့မှု (ထို NAc core နဲ့ shell ကိုငျဒသေ, အ BLA, အဖြစ် mPFC ၏ ACA ဒေသတွင်း၌အာရုံခံအတွက် immunolabeling Fos နှင့်အခွင့်အရေး၏သိသာထင်ရှားသောတိုးမှုပုံ 5) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ meth ၏အောက်ပိုင်းထိုးအခွင့်အရေးအလားတူနံပါတ်များအတွက်ရလဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေးပါးကိုဦးနှောက်ဒေသများတွင်4မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် meth အားဖြင့်သွေးဆောင်အဖြစ်အာရုံခံကပ်ထားပါတယ်။ ပို. အရေးကြီးသည်, အ NAc core နဲ့ခရုခွံ, BLA နှင့် ACA ကို dual အမည်တပ်ထားသောဆဲလ် (များ၏အရေအတွက်သိသိသာသာတိုးပြသပုံ 5c, f, ဈ, ဌ) unmated Meth- ထိုးသွင်းအထီး (p = 0.003- <0.001) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အချက်အလက်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်သက်ဆိုင်သောအာရုံခံများ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအခါ ၂၁.၁ ± ၀.၉% နှင့် ၂၀.၄ ± ၁.၈% အသီးသီးသည် NAc ၏အဓိကနှင့်အခွံတွင်၊ BLA တွင် ၄၁.၉ ± ၃.၉% နှင့် ACA အာရုံခံများ၏ ၄၉.၈ - ၀.၈% သည်လိင်အားဖြင့်ပြုသည်။ နှင့် Meth ။
15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် meth ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပါလိင်-သွေးဆောင် Fos နှင့် meth-သွေးဆောင်အခွင့်အရေး NAc, BLA အတွက်စကားရပ်နှင့် ACA တွင် neuron 1 မိ။ Fos ၏ sem (က, ဃ, ဆ, ည) ± mean နံပါတ်များ NAc core ကိုအတွက်အခွင့်အရေး (ခ, အီး, ဇ, ဋ), နှင့် dual-(ဂ, f, ဈ, ဌ) တံဆိပ်ကပ်ဆဲလ် (က, ...
အာရုံကြော Activation ဃ-ဖက်တမင်းဆေးပြားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးတွင်အောက်ပါ
အထက်ပါရလဒ်တွေကို meth များအတွက်တိကျသောခဲ့ကြသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှု mating- နှင့် Amph-သွေးဆောင်အာရုံကြော activation လေ့လာဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ အခွင့်အရေးနဲ့ Fos ဘို့တစ်ခုတည်းနှင့် dual-label တပ်ထားသောဆဲလ် analysis လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် Amph မှနောက်ဆက်တွဲထိတွေ့ Fos နှင့်အခွင့်အရေးအတွက် NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက် immunolabeling နှင့် BLA (၏သိသာထင်ရှားသောတိုးမှုကြောင့်ပြသပုံ 6; မိတ်လိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: F ကို (1,15) = 7.38-69.71; p = 0.016- <0.001; မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှု: F ကို (1,15) = 4.70-46.01; p = 0.047- <0.001) ။ ထို့အပွငျ dual- တံဆိပ်ကပ်အာရုံခံ၏နံပါတ်များကို unmated Amph- ကုသမှု (p = 0.009- <0.001), ဒါမှမဟုတ်မိတ်လိုက်ဆား - ကုသ (p = 0.015- <0.001) အထီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် mated Amph- ကုသအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်ပုံ 6c, f, ကိုယ်) ။ ဒေတာမူးယစ်ဆေး-activated အာရုံခံ, 25.7 ± 2.8% ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် 18.0 ± 3.2% ကို NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက်အသီးသီးနှင့် 31.4 ± 2.0 သောအခါ BLA အာရုံခံ၏% မိတ်လိုက်နှင့် Amph နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် activated ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ mPFC ၏ ACA ဒေသ (မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် Fos ၏သိသာထင်ရှားသောအဆင့်ဆင့်ပြသပုံ 6j; F ကို (1,15) = 168.51; p <0.001) ။ သို့သော် Meth နှင့်မတူဘဲ Amph သည် ACA တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော pERK အဆင့်ကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေခဲ့သည်။ပုံ 6k) သို့မဟုတ် ACA အတွက် dual-label တပ်ထားသောအာရုံခံ၏နံပါတ်များကို (ပုံ 6l) နှစ်ဦးစလုံး mated နှင့် unmated ဆား-ထိုးသွင်းယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ။
လိင်-သွေးဆောင် Fos နှင့် NAc, BLA အတွက် Amph-သွေးဆောင်အခွင့်အရေးစကားရပ်နှင့် ACA တွင် neuron 15 မိ5၏အောက်ပါအုပ်ချုပ်မှု / ကီလိုဂရမ် Amph MG ။ Fos ၏ sem (က, ဃ, ဆ, ည) ± mean နံပါတ်များ NAc core ကိုအတွက်အခွင့်အရေး (ခ, အီး, ဇ, ဋ), နှင့် dual-(ဂ, f, ဈ, ဌ) တံဆိပ်ကပ်ဆဲလ် (က, ...
လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုဆယ်လူလာ level မှာအာရုံကြောသဘာဝစစ်ကူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့် activation နှင့် psychostimulant meth အကြားတစ်ဦးထပ်နေသည်ကိုပြသသည်။ ထို့ကြောင့်ဤဒေတာမူးယစ်ဆေးဝါးများကသဘာဝဆုလာဘ်ထိန်းညှိသောတူညီသောဦးနှောက်ဒေသများအပေါ်ပြုမူ, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့, မူးယစ်ဆေးဝါးသဘာဝကဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အတူတူပင်ဆဲလ်ကိုသက်ဝင်ကြဘူးမသာကြောင်းပြသပါ။ အထူးသက meth လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်အလားအလာက်ဘ်ဆိုက်များဖော်ထုတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် meth Co-activated ကြောင့်ဒီမှာ mPFC ၏ NAc core နဲ့ခရုခွံ, BLA နှင့် ACA ဒေသတွင်း၌အာရုံခံ၏လူဦးရေပြသခဲ့သည်။
လက်ရှိ meth ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် NAc အတွက်အာရုံခံ၏ထပ်လူဦးရေကိုသက်ဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်, BLA နှင့် ACA NAc အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဆုလာဘ်ဝှက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကတခြားလေ့လာမှုတွေကနေတွေ့ရှိချက်မတူဘဲ၌တည်ရှိ၏။
အထူးသဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ် (အစားအသောက်နှင့်ရေ) ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သွေးကြောသွင်းကင်းစဉ်အတွင်းအာရုံကြော activation နှိုင်းယှဉ်ကြောင်း electrophysiological လေ့လာမှုများကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးရေများအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာကာလအတွင်းယေဘုယျအားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအာရုံခံတစ် differential ကို non-ထပ်လူဦးရေ activated ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြ နှင့်အစားအစာအားဖြည့် (92%) ။ accumbal အာရုံခံသာ 8% ကိုကင်းနှင့်သဘာဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် activation ပြသ (Carelli et al ။ , 2000).
ဆနျ့ကငျြဘ၌, NAc အတွက်ဆဲလ်တစ်အများစု (65%) တဦးတည်းစစ်ကူ (sucrose) ကပိုအရေးပါတယ်လို့ခဲ့လျှင်ပင်ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝအဆုလာဘ် (အစားအသောက်နှင့်ရေ) က activation ပြသ (Roop et al ။ , 2002).
အများအပြားအချက်များလက်ရှိရလဒ်တွေကိုအတူကွာဟမှုမှလှူဒါန်းခဲ့ကြပေမည်။ ပထမဦးစွာကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုဦးနှောက်ဧရိယာကြီးမား span ကျော်တစ်ခုတည်းဆဲလ် activation ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဘို့အခွင့် Fos နှင့်အခွင့်အရေးအဘို့ကို dual fluorescencent immunocytochemisty သုံးပြီးနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းအာရုံကြော activation ၏ထောက်လှမ်းများအတွက် neuroanatomical နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသွားမည်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, Carelli နေဖြင့်လေ့လာမှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုသဘာဝဆုလာဘ်အသုံးပြုသောတူညီအာရုံကြော circuitry ကိုသက်ဝင်ရှိမရှိဖြေရှင်းရန်တိရိစ္ဆာန်များပြုမူ၏ NAc ဖို့ကန့်သတ် electrophysiological အသံသွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက်မှာလက်ရှိလေ့လာမှုကန့်သတ်ကြွက်များတွင်အစားအသောက်နှင့်ရေကိုအသုံးပြုရသောယခင်လေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည့်သဘာဝဆုလာဘ်, စုံစမ်းစစ်ဆေး (Carelli, 2000). အစားအစာနှင့်ရေမိတ်လိုက်ထက်ပြောင်ကြိုးတန်ဖိုးလိမ့်မယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလွန်အမင်းကြိုးသည်နှင့်ကြွက်အလွယ်တကူသုတ်ရည်ထိမှ CPP ကဖွဲ့စည်း (Agmo နှင့် Berenfeld, 1990, Martinez နှင့်သိပ်မရှိပါဘူး, 2001, Tenk, 2008). အစားအသောက်များတွင်ကန့်သတ်ကြွက်ရေ CPP ကဖွဲ့စည်းပြုပေမယ့် (Agmo et al ။ , 1993, အခွင့်အရေးနဲ့ Clifton, 1997) နှင့်အစားအစာ (အခွင့်အရေးနဲ့ Clifton, 1997), ဃiet တားမြစ်ခြင်းမရှိသောကြွက်များပိုကောင်း (ပိုအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများများအတွက် CPP ကလောင်နှင့်ဖွဲ့စည်းJarosz et al ။ , 2006, Jarosz et al ။ , 2007).
တတိယကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအစားကင်း၏စိတ်ကြွဆေးနှင့်စိတ်ကြွဆေးအသုံးချဖို့ယခင်လေ့လာမှုများ, နှိုင်းယှဉ်အလွဲသုံးစားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများပါဝင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုအထူးသ meth ကြောင်းနှင့်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာစိတ်ကြွဆေးမှသရုပ်ပြလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများက activated အာရုံခံ၏ activation ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးအတှေ့အကွုံကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ထဲမှာအချက်တစ်ချက်လည်းကစားကြပေမည်။ လိင်ကြုံတွေ့ပေမယ့်မူးယစ်ဆေးရင်တော့မှားမယ်ခဲ့တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုသွားမည်လက်ရှိလေ့လာမှုများ။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, electrophysiological Carelli ၏လေ့လာမှုများနှင့် Co-လုပ်သားများကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့မှုလက်ခံရရှိကြောင်း "ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြား" တိရိစ္ဆာန်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒါကွောငျ့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများက activated အာရုံခံ၏ meth-သွေးဆောင် activation မူးယစ်ဆေးကြုံတွေ့ကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းကနေပဏာမလေ့လာမှုများလက်ရှိလေ့လာမှုအစီရင်ခံအဖြစ်မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကိုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေး-activated အာရုံခံ၏ meth Co-activated အလားတူရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကုသယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် meth ကုသမှုအဖြစ်အဓိကအချက်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြု (20.3 ± 2.5 NAc core နဲ့ 27.8 အတွက်% NAc shell ကိုအတွက် 1.3% ±; Frohmader နှင့် Coolen, အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်) ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိလေ့လာမှု passive အုပ်ချုပ်ရေးအသုံးချဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ "တိုက်ရိုက်" action ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမူးယစ်ဆေးရှာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်မှဆက်စပ်တွေကိုပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောဆားကစ်နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်ပေမယ်မဟုတ်ဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ pharmacological အရေးယူမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုထုတ်ဖော်ပြသပါဘူး။ ယခင် electrophysiological လေ့လာမှုများများတွင်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုများစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ် NAc အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (ကိုကင်းများ၏ pharmacological လုပ်ဆောင်ချက်၏ရလဒ်မဟုတ်ပေမယ့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်းအတွင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့အချက်များပေါ်မှာအလွန်မှီခိုဖြစ်ပါသည်Carelli, 2000, Carelli, 2002) ။ အထူးသ NAc အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (ဒီအမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းအတွက်မွေးရာပါ (ဆိုလိုသည်မှာ, လီဗာကိုနှိပ်) သွေးကြောသွင်းကင်းပေးပို့နဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏တုံ့ပြန်မှု-လွတ်လပ်သောတင်ပြချက်များအားဖြင့်အဖြစ်ဆာပေါ်ဖြစ်ပေါ်လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်Carelli, 2000, Carelli နှင့် Ijames, 2001, Carelli, 2002, Carelli နှင့် Wightman, 2004). အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ကပူးတွဲ activation ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့် activation များအတွက်တိကျသောဖြစ်နှင့်လတ်တလောတွင် meth နှင့် Amph အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။
meth နှင့်လိင်တစ်ဦးထိုး-မှီခိုထုံးစံအတွက် NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက်အာရုံခံ၏ထပ်လူဦးရေ activated ။ အဆိုပါ NAc ၏တွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှောင့်အယှက်အဖြစ် NAc အတွက် Co-activated အာရုံခံ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် meth ၏အလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါလျူ et al ။ , 1998, Kippin et al ။ , 2004) ။ ထို့အပြင်ဤအာရုံခံအလားအလာမိတ်လိုက်ပေါ်ထိုး-မှီခိုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများများအတွက် locus ဖြစ်ကြသည်အောက်ပိုင်း meth ထိုးကတည်းက (1 / ကီလိုဂရမ် mg) meth ၏မြင့်မားထိုးနှိုင်းယှဉ် 50% အားဖြင့် dual-label တပ်ထားသောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချ (4 / MG ကီလိုဂရမ်)။ ဒီလေ့လာမှုက Co-activated အာရုံခံများ၏ဓာတု phenotype ခွဲခြားသတ်မှတ်မထားဘူးသော်လည်း, ယခင်လေ့လာမှုများ NAc အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အခွင့်အရေးနှင့် Fos စကားရပ်နှစ်ခုလုံး dopamine (DA) အပေါ်မှီခိုသည်နှင့်အချိုမှု receptors (ပြကြပါပြီValjent et al ။ , 2000, ဖာဂူဆန် et al ။ , 2003, Valjent et al ။ , 2005, နေရောင် et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ NAc အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်အာရုံကြော activation သည်ဤ receptors အပေါ်မှီခိုလျှင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးပေမယ့်, ဒီအထူးသဖြင့် medial preoptic ဧရိယာ (မှာရှိတဲ့အခြားဦးနှောက်ဒေသများအပေါ်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးLumley နှင့် Hull, 1999, Dominguez et al ။ , 2007). THUS, meth လည်း dopamine နဲ့အချိုမှု receptors ၏ activation ကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း activated အာရုံခံအပေါ်ပြုမူလိမ့်မည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် NAc အချိုမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါသည်, သို့သော် DA လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍကြောင်းကောင်းစွာတည်ထောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ် (Hull et al ။ , 2002, Hull et al ။ , 2004, Pfaus, 2009) ။ Microdialysis လေ့လာမှုများ (အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်စဉ်အတွင်း NAc DA efflux အတွက်တိုးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်Fiorino နှင့် Phillips က, 1999a, Lorraine et al ။ , 1999) နှင့် mesolimbic DA efflux (ကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများပံ့ပိုးရန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်Pfaus နှင့် Everitt, 1995). ထို့အပွငျ DA ကိုင်တွယ်လေ့လာမှုများ agonists လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ behavio ၏စတင်လွယ်ကူချောမွေ့နေစဉ် NAc အတွက် DA ရန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးကိုပြသr (Everitt et al ။ , 1989, Pfaus နှင့် Phillips က, 1989) ။ ထို့ကြောင့် meth DA receptors ၏ activation ကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါ NAc မတူဘဲခုနှစ်, BLA နှင့် ACA အတွက် dual-label တပ်ထားသောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုမသက်ဆိုင်သည့် meth ထိုး၏အတော်လေးမပြောင်းလဲရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ BLA discrete ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုများအတွက်အရေးပါသည်နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန် (တုံ့ပြန်ဆာပစဉ်အတွင်း conditional အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အကဲဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်Everitt et al ။ , 1999, Cardinal et al ။ , 2002, 2002, ကြည့်ရှုပါ) ။ BLA lesioned ကြွက် display ကို (စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အတူတွဲ conditional လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်နှိပ်လီဗာလျော့နည်းသွားEveritt et al ။ , 1989) သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့် (Everitt et al ။ , 1989, Everitt, 1990) ။ ဆနျ့ကငျြ, ဒီကိုင်တွယ် (နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်မထိခိုက်ပါဘူးCardinal et al ။ , 2002). အဆိုပါ BLA လည်းမူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ် conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ (ကျေးဇူးတော်နှင့် Rosenkranz, 2002, Laviolette နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2006) ။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဒါမှမဟုတ် BLA ၏ pharmacological inactivations (ဝယ်ယူပိတ်ဆို့Whitelaw et al ။ , 1996) နှင့်စကားရပ် (Grimm နှင့်ကြည့်ရှု 2000) အေးစက်-cued ကင်း reinstatement မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်စေမပေးနေစဉ်။ ထို့အပွငျ Amph ဟာအေးစက်တွေကိုရှေ့မှောက်တွင်အတွက်အလားအလာရှိသောမူးယစ် reinstatement အတွက် BLA ရလဒ်များကိုသို့တိုက်ရိုက်ထုံမွှန်း (et al ။ , 2003 ကိုကြည့်ပါ). ထို့ကြောင့် BLA ရလဒ်များကိုအတွက် psychostimulant-တိုးမြှင် DA ဂီယာအလားအလာစိတ်ခံစားမှု salience နှင့်ရှာကြံဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် (Ledford et al ။ , 2003) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏, ဤသို့ meth အလွဲသုံးစားပြုသူများကအစီရင်ခံသည်အဆိုပါတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုများနှင့်အလိုဆန္ဒမှပံ့ပိုး (Semple et al ။ , 2002, အစိမ်းရောင်နှင့် Halkitis, 2006).
က Amph နှင့်အတူစောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရအဖြစ် ACA မှာတော့လိင်-activated အာရုံခံ၏အာရုံကြော activation, meth များအတွက်သောက်သုံးသော-လွတ်လပ်သောနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ meth နှင့် Amph အလားတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများရှိပေမယ့်, meth ရှည်တည်တံ့သက်ရောက်မှု (NIDA, 2006) နဲ့ Amph ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက် psychostimulant ဖြစ်ပါတယ်။ Goodwin et al အားဖြင့်လေ့လာရေး။ meth ကြီးမြတ်သော DA efflux ထုတ်ပေးနှင့်ဒေသအလိုက် Amph ထက်ကြွက် NAc ပိုမိုထိရောက်စွာ DA လျှောက်ထား၏ရှင်းလင်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဝိသေသလက္ခဏာများ (Amph နှိုင်းယှဉ် meth ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများအထောက်အကူပြုနိုင်Goodwin et al ။ , 2009) နှင့်နှစ်ဦးကိုမူးယစ်ဆေးများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ကောင်းအာရုံကြော activation ကွဲပြားခြားနားမှု။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ရလဒ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအလုပ်နှင့်ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမလိုအပ်သည့်ဆေးများနှင့်ပတ်သက်သောမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အာနိသင်ကိစ္စများအကြားထိရောက်မှုကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
meth နှင့်လိင်ကပူးတွဲတက်ကြွစွာ mPFC (IL နှင့် PL) ၏အခြားအငျဒသေလေ့လာမခံခဲ့ရပါဘူး။ ကြွက်များတွင်, ACA ကျယ်ကျယ်လှုံ့ဆော်မှု-စစ်ကူအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ supporting, အစာစားချင်စိတ်တာဝန်များကိုသုံးပြီးလေ့လာခဲ့ခဲ့ပြီး (Everitt et al ။ , 1999, 2002, ကြည့်ရှုပါ, Cardinal et al ။ , 2003). အဆိုပါ mPFC လူသားများနှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူမှမူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့် relapse အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (ပေးသနား et al ။ , 1996, Childress et al ။ , 1999, Capriles et al ။ , 2003, McLaughlin နှင့်ကြည့်ရှု 2003, Shaham et al ။ , 2003, Kalivas နှင့် Volkow, 2005) ။ ငါဤဎလိုင်းတစ်ခုကိုအများအပြားစွဲလေ့လာအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွား mPFC အလုပ်မဖြစ်လျှော့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး-ညွှန်ကြားအပြုအမူများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်အံ့သောငှါအဆိုပြုပြီးပါပြီ (Jentsch နှင့်တေလာ, 1999). ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေမကြာသေးမှီကဒေတာဒီတစ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်အခါ mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဆက်လက်ရှာမှုကြောင့်သရုပ်ပြ (Davis က et al ။ , 2003) ။ ဒီလေ့လာမှု ACA စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မပြုခဲ့သော်လည်း, က meth အလွဲသုံးစားပြုသူများကအစီရင်ခံအဖြစ် (အထူးသနှင့် ACA) ကို mPFC (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအရှုံးပေါ် meth ၏သက်ရောက်မှု mediates သောယူဆချက်ကို supportSalo et al ။ , 2007).
နိဂုံးချုပ်မှာတော့အတူတူဒီလေ့လာမှုတွေပုံမှန်အားဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်ဖျန်ဖြေကြောင့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ်အလွဲသုံးမှုလုပ်ရပ်၏ပုံကိုမူးယစ်ဆေးပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကိုဦးတည်နေတဲ့အရေးပါသောပထမခြေလှမ်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထို့အပြင်ဤတွေ့ရှိချက်များအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကသဘာဝဆုလာဘ်အဖြစ် mesolimbic စနစ်အတူတူပင်ဆဲလ်ကိုသက်ဝင်ကြဘူးသောလက်ရှိယုံကြည်ချက်, meth မတူဘဲ၌၎င်း, တစ်ဦးပြောင်အတိုင်းအတာ Amph ကိုသရုပျဖျော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကဲ့သို့တူညီသောဆဲလ်တွေကိုသက်ဝင်။ အလှည့်များတွင်ဤ Co-activated အာရုံကြောလူဦးရေမူးယစ်ဆေးထိတွေ့အောက်ပါသဘာဝအဆုလာဘ်များရှာသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုသိသိသာသာယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်း၏အခြေခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်အထောက်အကူပြုပေမည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့်ရူးနှမ်းအဆိုပါ mesolimbic စနစ်၏အာရုံကြော activation အတွက်တူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု၏နှိုင်းယှဉ်, အပြင်ကိုပြောင်းလဲပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်သဘာဆုလာဘ်အတွက်ဆက်စပ်ပွောငျးလဲ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ဒါဟာသုတေသန LMC မှကနျြးမာရေး R01 DA014591 နှင့်ကျန်းမာရေးသုတေသန RN 014705 ၏ကနေဒါ Institutes အမျိုးသား Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
avidin-ဓါတ်-horseradish peroxidase ရှုပ်ထွေးသော
anterior cingulate ဧရိယာ
အဆိုပါ stria terminalis ၏ posterolateral အိပ်ရာနျူကလိယ
အဆိုပါ stria terminalis ၏ posteromedial အိပ်ရာနျူကလိယ
mitogen-activated ပရိုတိန်း kinase
medial preoptic နျူကလိယ
ဖော့စဖိတ် buffered ဆား
ejaculatory ကြားကာလ post
phosphorylated သည့် MAP Kinase
Agmo တစ်ဦးက, Federman ငါ Navarro V ကို, Padua M က, သောက်ရေကထုတ်လုပ် Velazquez G. အဆုကြေးနှင့်အားဖြည့်: opioids နှင့် dopamine အဲဒီ receptor Subtype ၏အခန်းက္ပ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1993; 46 [PubMed]
Baum MJ, Everitt BJ ။ အဆိုပါ medial amygdala နှင့် midbrain အလယ်ပိုင်း tegmental တောမှ afferent သွင်းအားစု၏အခန်းက္ပ: အထီးကြွက်များတွင်အဖော်ရှာပြီးနောက် medial preoptic ဧရိယာ၌က c-fos ၏စကားရပ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ neuroscience ။ 1992; 50: 627-646 ။ [PubMed]
Capriles N ကို, Rodaros: D, Sorge RE, Stewart ကဂျေကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ stress- နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် prefrontal cortex တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 168: 66-74 ။ [PubMed]
Cardinal RN, ပါကင်ဆန်ဂျေ, ခန်းမ J ကို, Everitt BJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အ amygdala, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္။ ။ Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ။ 2002; 26: 321-352 ။ [PubMed]
Cardinal RN, ပါကင်ဂျာ Marbini HD ကို, Toner AJ, Bussey တီဂျေ, Robbins TW, Everitt BJ ။ ကြွက်များတွင် Pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် anterior cingulate cortex ၏အခန်းက္ပ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2003; 117: 566-587 ။ [PubMed]
Carelli RM ။ Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းကင်းပေးပို့နဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် accumbens ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်၏ activation ။ synapses ။ 2000; 35: 238-242 ။ [PubMed]
Carelli RM ။ ကိုကင်းသည်သဘာဝအားဖြည့်အားဖြည့်ခြင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူများပြုလုပ်ရာတွင်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကို Nucleus ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2002; 76: 379-387 ။ [PubMed]
Carelli RM, Ijames စင်ကာပူဒေါ်လာ။ ရေ / ကင်းမျိုးစုံအချိန်ဇယားစဉ်အတွင်းကင်း-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် accumbens အာရုံခံ၏ရွေးချယ် activation ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2001; 907: 156-161 ။ [PubMed]
Carelli RM, Wightman RM ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအခြေခံသည့် accumbens အတွက် functional microcircuitry: အပြုအမူစဉ်အတွင်းအချက်ပြ Real-time အနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2004; 14: 763-768 ။ [PubMed]
Carelli RM, နျူကလိယအားဖြင့်သဘာဝကဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်ကင်း၏ Wondolowski ဂျေရွေးချယ် encoding ကအာရုံခံနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူး accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 11214-11223 ။ [PubMed]
Chang JY, Zhang က L ကို, Janak PH သည်, Woodward DJ သမား။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 754: 12-20 ။ [PubMed]
Chen က BT, Bower က MS, မာတင် M က, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Guillory လေး, Carelli RM, Chou JK, Bonci အေကင်းပေမယ့်သဘာဝမဆုကြေးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်သလိုတွေမှာ Passive ကင်းပြုတ်ရည်ဟာ VTA အတွက် Persistent LTP ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 288-297 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chen က PC ကို, ချန် JC ။ အဆိုပါ Ventral ထူးခြားသော၏ Striatum နှင့်နာတာရှည်သမ်ဖက်တမင်း-ကုသသည်အထိအတွက် Cdk5 လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် p35 ့စ Enhanced ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 30: 538-549 ။ [PubMed]
Childress AR, Mozley PD, McElgin W က, Fitzgerald J ကို, Reivich M က, O 'Brien က CP ။ cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း Limbic activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 11-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Choe ES, Chung KT, မော်စီတုန်း, L, ဝမ် JQ ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားငါအချိုမှု receptors metabotropic အုပ်စုတစ်စုကနေတဆင့်ကြွက် striatum အတွက် extracellular signal ကို-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinase နှင့်ကူးယူအချက်များ၏ phosphorylation တိုးပွားစေပါသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 27: 565-575 ။ [PubMed]
Choe ES, ဝမ် JQ ။ CaMKII striatal အာရုံခံအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် ERK1 /2phosphorylation ထိန်းညှိ။ Neuroreport ။ 2002; 13: 1013-1016 ။ [PubMed]
Davis က JF လြော့ရဲ M က, Coolen LM ။ အပြုအမူ Neuroendocrinology များအတွက် Society က။ vol ။ 44 ။ စင်စင်နာတီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်: ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ; 2003 ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex ၏တွေ့ရှိရပါသည်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှောင့်အယှက်မထင်သော်လည်း, စ။ 45 ။
Dominguez JM, Balfour ME, Lee က HS, Brown က HJ, Davis က BA, Coolen LM ။ မိတ်လိုက်အထီးကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာ၌ NMDA receptors မြှင့်လုပ်ဆောင်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2007; 121: 1023-1031 ။ [PubMed]
Elifson KW, Klein H ကို, Sterk အီး။ အသစ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ခန့်မှန်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2006; 43: 318-327 ။ [PubMed]
Ellkashef တစ်ဦးက, Vocci က F, Hanson, G, White, J ကိုဆိုး W က, သမ်ဖက်တမင်းစွဲ၏ Tiihonen ဂျေ Pharmacotherapy: တစ်ခုက update ကို။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားမှု။ 2008; 29: 31-49 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Everitt BJ, Cador M က, Robbins TW ။ လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များအတွက် amygdala နှင့် ventral striatum အကြားအပြန်အလှန်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်တဲ့ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ။ neuroscience ။ 1989; 30: 63-75 ။ [PubMed]
Everitt BJ, ပါကင်ဂျာ Olmstead MC, အာရိုယိုက M, Robledo P ကို, Robbins TW ။ စွဲလမ်းမှုအတွက် Associative လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် Amygdala-Ventral Striatal subsystem ၏အခန်းက္ပ၌ဆပ်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 1999; 877: 412-438 ။ [PubMed]
Everitt BJ, အထီးကြွက် (Rattus norvegicus) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်နှင့်အတူဆာပအပြုအမူများ Stacey P. လေ့လာရေး: II ကို။ preoptic ဧရိယာကိုတွေ့ရှိရပါသည်, သင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ J ကို comp Psychol ။ 1987; 101: 407-419 ။ [PubMed]
Feltenstein မဂ္ဂါဝပ်, ကြည့်ရှု RE ။ စွဲလမ်းမှု၏ neurocircuitry: ခြုံငုံသုံးသပ်။ br J ကို Pharmacol ။ 2008; 154: 261-274 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဖာဂူဆန်သည် SM, က Norton CS, Watson ဟာ SJ, Akil H ကို, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အဆိုပါ caudate-putamen အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-evoked က c-fos mRNA စကားရပ်: DA နှင့် NMDA အဲဒီ receptor ရန်၏သက်ရောက်မှုတွင် neuron phenotype နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်တစ် function ကိုအဖြစ်ခြားနားသည်။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 2003; 86: 33-44 ။ [PubMed]
Fiorino DF, Coury တစ်ဦးက, Phillips က AG က။ နျူကလိယအတွက် dynamic အပြောင်းအလဲများကိုအထီးကြွက်များတွင် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်အတွင်း dopamine efflux accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 4849-4855 ။ [PubMed]
Fiorino DF, Phillips က AG က။ D-ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်အပြုအမူအသိမြှပြီးနောက်အမျိုးသားသည်အထိ၏နျူကလိယ Accumbens အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် Enhanced Dopamine Efflux ၏နည်းပြ။ J ကို neuroscience ။ 1999a; 19: 456-463 ။ [PubMed]
Fiorino DF, Phillips က AG က။ D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအောက်ပါအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏နည်းပြ။ Psychopharmacology ။ 1999b; 142: 200-208 ။ [PubMed]
Goodwin JS, Larson GA, Swant J ကို, Sen N ကို, Javitch ဂျာ Zahniser ရော်ဘာ, De Felice LJ, Khoshbouei အိပ်ချ်ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်သမ်ဖက်တမင်း differential စသည်တို့နှင့် Vivo အတွက် Dopamine ပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ J ကို Biol Chem ။ 2009; 284: 2978-2989 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Rosenkranz ဂျေအေ။ basolateral amygdala အာရုံခံ၏အေးစက်တုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်း။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2002; 77: 489-493 ။ [PubMed]
cue-ရူးနှမ်းကိုကင်းတဏှာကာလအတွင်းက S, လန်ဒန် ED, NEWLINE DB, Villemagne VL, လျူက X, Contoreggi ကို C, Phillips က RL, Kimes AS, မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ Margolin အေ Activation ပေးသနား။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1996; 93: 12040-12045 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အစိမ်းရောင် AI အ, Halkitis PN ။ မြို့ပြလိင်တူချစ်သူယဉ်ကျေးမှုတွင် Crystal methamphetamine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး။ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်။ 2006; 8: 317-333 ။ [PubMed]
Grimm JW, RE ကိုကြည့်ပါ။ relapse ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာ limbic အရေးပါ၏ Dissociation ။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 473-479 ။ [PubMed]
Hull က EM, Lorraine DS, ဒူ J ကို, Matuszewich L ကို, Lumley LA က, Putnam SK ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုမောရှေဂျေဟော်မုန်း-neurotransmitter interaction က။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1999; 105: 105-116 ။ [PubMed]
Hull က EM, Meisel RL, Sachs bd ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ခုနှစ်တွင်: ။ et al Pfaff DW, အယ်ဒီတာများ။ ဦးနှောက်နှင့်အမူအကျင့် Hormones ။ San Diego မှ,, CA: Elsevier သိပ္ပံ (USA); 2002 ။ စစ။ 1-138 ။
Hull EM, Muschamp JW, Sato S. Dopamine နှင့် serotonin: အထီးလိင်အပြုအမူအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2004; 83: 291-307 ။ [PubMed]
Ishikawa K ကို Nitta တစ်ဦးက, Mizoguchi H ကို, Mohri တစ်ဦးက, Murai R ကို, Miyamoto Y ကို, နို Y ကို, Kitaichi K ကို Yamada K ကိုကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ neuroglycan ကို C ဗီဇစကားရပ်အပေါ်စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်တစ်ခုတည်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေး Nabeshima တီအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2006; 9: 407-415 ။ [PubMed]
Jarosz PA ဆိုပြီး, Kessler JT, Sekhon P ကို, Coscina DV ။ အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည် vs. ဗီဇကျရောက်နေတဲ့ကြွက်ဗီဇအတွက်မြင့်မားသောကယ်လိုရီ "ရေစာအစားအစာများ" ကိုအေးစက်သောအရပ်ဦးစားပေး (CPPs): naltrexone ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှ Resistance ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2007; 86: 699-704 ။ [PubMed]
Jarosz PA ဆိုပြီး, Sekhon P ကို, Coscina DV ။ ရေစာပါတဲ့အစားအစာ conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးအပေါ် opioid ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2006; 83: 257-264 ။ [PubMed]
Jentsch JD, တေလာ JR ။ ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse ။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 146: 373-390 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1403-1413 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲ: shared အာရုံကြော circuitry နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 44: 161-179 ။ [PubMed]
Kippin TE, Sotiropoulos V ကို, Badih J ကို, Pfaus JG ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏အခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ anterior ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2004; 19: 698-704 ။ [PubMed]
Laviolette SR, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ Cannabinoids Basolateral Amygdala ထည့်သွင်းမှုများမှတဆင့် Medial Prefrontal Cortex ၏အာရုံခံအတွက်စိတ်ခံစားမှုသင်ယူပလပ်စတစ် Potentiate ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 6458-6468 ။ [PubMed]
Ledford CC ကို, Fuchs RA, ကြည့်ရှု RE ။ အဆိုပါ Basolateral Amygdala သို့ D-စိတ်ကြွဆေးပြုတ်ရည်အပြီးတွင်ကင်း-ရှာအပြုအမူ၏အလားအလာ Reinstatement ။ Neuropsychopharmacology ။ 2003; 28: 1721-1729 ။ [PubMed]
လျူ YC, Sachs bd, Salamone JD ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် radiofrequency သို့မဟုတ် dopamine-depleting ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1998; 60: 585-592 ။ [PubMed]
Lorraine DS, Riolo ဖက်စပ်, Matuszewich L ကို, Hull က EM ။ lateral Hypothalamic serotonin တားစီးနျူကလိယ Accumbens Dopamine: လိင်မွတ်မပြေနိုင်သောအဘို့အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 7648-7652 ။ [PubMed]
Lumley LA က, Hull က EM ။ တစ်ဦး D1 ရန်နှင့် medial preoptic နျူကလိယထဲမှာသုတ်ရည်ထိ-သွေးဆောင် Fos ကဲ့သို့ immunoreactivity အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1999; 829: 55-68 ။ [PubMed]
McLaughlin J ကို, ကြည့်ရှု RE ။ အဆိုပါ dorsomedial prefrontal cortex နှင့် basolateral amygdala ၏ရွေးချယ် inactivation ကြွက်များတွင်ငွိမျးကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ conditional-cued reinstatement attenuates ။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 168: 57-65 ။ [PubMed]
Mitchell က JB ယခင်ကမော်ဖင်းအကိုက်စနစ်တကျထိုးနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်းအတွက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ Stewart ကဂျေနည်းပြ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1990; 35: 367-372 ။ [PubMed]
Mizoguchi H ကို, Yamada K ကို Mizuno M က, Mizuno T က, Nitta တစ်ဦး, နို Y ကို, Dopamine NIDA ၏ Activation မှတဆင့် Extracellular Signal-စည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှု Kinase 1 /2/ ETS-လိုပဲ Gene-1 signal Pathway (ခွငျးအားဖွငျ့သမ်ဖက်တမင်းဆုကြေး၏ Nabeshima တီစည်းမျဉ်းများ သုတေသနအစီရင်ခံစာစီးရီး: ။ ။ သမ်ဖက်တမင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့် addiciton 2006 NIH ထုတ်ဝေမှုအရေအတွက်ကို 06-4210 [PubMed]
အခွင့်အရေး SM, Clifton PG ။ ပိုမိုအားဖြည့်ပြန်လည်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်နေရာကို ဦး စားပေးအခြေအနေကိုသတ်မှတ်ခြင်း။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1997; 61: 1-5 ။ [PubMed]
Pfaus JG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏လမ်းကြောင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်။ 2009; 6: 1506-1533 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Everitt BJ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ psychopharmacology ။ ခုနှစ်တွင်: Bloom FE, Kupfer DJ သမား, အယ်ဒီတာများ။ Psychopharmacology: တိုးတက်မှု၏စတုတ္ထမျိုးဆက်။ နယူးယောက်: Raven; 1995 ။ စစ။ 743-758 ။
Pfaus JG, Heeb MM ။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွဆေးအပြီးတွင်အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာလတ်တလော-အစောပိုင်း Gene induction ၏ဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက်သုတေသနသတင်းလွှာ။ 1997; 44: 397-407 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏သက်ရောက်မှု Differential ။ Psychopharmacology ။ 1989; 98: 363-368 ။ [PubMed]
Pierce RC, Kumaresan V. အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်: အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်း? Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ။ 2006; 30: 215-238 ။ [PubMed]
အိုး KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand မိုင်, ယု L ကို, Coolen LM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ mesolimbic စနစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဟားဗတ်။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2009 ။
Ranaldi R ကို, Pocock: D, Zereik R ကို, ပညာရှိ RA ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Dopamine အတက်အကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, မျိုးသုဉ်းခြင်း, သွေးကြောသွင်း D-စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး reinstatement စဉ်အတွင်း accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 4102-4109 ။ [PubMed]
Rawson RA, Washton တစ်ဦးက, Domier က CP, Reiber C. မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု: မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားနှင့်ကျား, မများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2002; 22: 103-108 ။ [PubMed]
Robertson က GS, Pfaus JG, Atkinson LJ, Matsumura H ကို, Phillips က AG က, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယောက်ျားကြွက်များ၏ forebrain အတွက်က c-fos စကားရပ်တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 564: 352-357 ။ [PubMed]
Roop RG, Holland RJ, Carelli RM ။ ကြွက်များတွင်ရေနှင့် sucrose အားဖြည့်များအတွက်မျိုးစုံအချိန်ဇယားကာလအတွင်းလှုပ်ရှားမှု Accumbens ။ synapses ။ 2002; 43: 223-226 ။ [PubMed]
Salo R ကို, Nordahl TE, Natsuaki Y ကို, Leamon MH, Galloway မိသားစုဆရာဝန်, ရေကို C, Moore က CD ကို, Buonocore MH ။ သမ်ဖက်တမင်းချိုးဖောက်မှုများအတွက်အာရုံစိုက်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဦးနှောက် Metabolite Levels နဲ့။ ဟားဗတ်။ 2007; 61: 1272-1280 ။ [PubMed]
Schilder AJ, Lampinen TM, Miller က ML, Hogg သည် RS ။ crystal စိတ်ကြွဆေးနှင့် ecstasy ငယ်ရွယ်လိင်တူချစ်သူလူတို့တွင်လုံခြုံလိင်နှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြား။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 2005; 96: 340-343 ။ [PubMed]
RE ကိုကြည့်ပါ။ မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှ conditional-cued relapse ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2002; 71: 517-529 ။ [PubMed]
RE, Fuchs RA, Ledford CC ကို, McLaughlin ဂျေမူးယစ်ဆေးစွဲမှု, Relapse, နှင့် Amygdala ကိုကြည့်ပါ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2003; 985: 294-307 ။ [PubMed]
Semple SJ, ပက် TL, လိင်တူဆက်ဆံသူကို HIV ပိုးလူတို့တွင်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် Grant ကဗြဲလှုံ့ဆျောမှု။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2002; 22: 149-156 ။ [PubMed]
Shippenberg TS, Heidbreder ကို C, Lefevour အေအသိမြှမော်ဖင်းအကိုက်၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုမှ: ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1996; 299: 33-39 ။ [PubMed]
Somlai လေး, ကယ်လီဂျာ McAuliffe TL, Ksobiech K ကို Hackl KL ။ ဆေးထိုးဆေးသုံးပြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာများတွင် HIV ပိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများခန့်မှန်း။ AIDS နှင့်အပြုအမူ။ 2003; 7: 383-393 ။ [PubMed]
Springer တစ်ဦး, ပီတာ, R Shegog R ကို, အဖြူရောင် D ကို, Kelder အက်စ်သမ်ဖက်တမင်းအသုံးပြုမှုနှင့်အမေရိကန် High School တွင်ကျောင်းသားများအတွက်လိင်အန္တရာယ်အပြုအမူ: တစ်အမျိုးသားအန္တရာယ်အပြုအမူစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ။ 2007; 8: 103-113 ။ [PubMed]
dopamine ၏နေရောင် WL, Zhou L ကို, Hazim R ကို, Quinones-Jenab V ကို, Jenab အက်စ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် Fischer ကြွက်များ၏ striatum အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် Fos စကားရပ်အပေါ် NMDA receptors ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2008; 1243: 1-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Swanson LW, အယ်ဒီတာ။ ဦးနှောက် Maps ကို: အ Rat ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံ။ အမ်စတာဒမ်: Elsevier သိပ္ပံ; 1998 ။
Tenk CM, Wilson က H ကို, Zhang ကမေး, အိုး KK, Coolen LM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုက်နှင့် intromissions နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျကို preference ကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Valjent အီး, Corvol JC, စာမျက်နှာများကို C, Besson MJ, Maldonado R ကို, ကိုကင်း-ဆုချီးဂုဏ်သတ္တိများများအတွက် extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase အဆငျ့ဆငျ့၏ Caboche ဂျေပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 8701-8709 ။ [PubMed]
Valjent အီး, Pascoli V ကို, Svenningsson P ကိုပေါလုသည်က S, Enslen H ကို, Corvol JC, Stipanovich တစ်ဦးက, Caboche J ကို, Lombroso PJ, Nairn AC အ, Greengard P ကို, Herve: D, Girault ဂျေအေ။ ပရိုတိန်း phosphatase အဆငျ့ဆငျ့၏စည်းမျဉ်း convergence dopamine နဲ့အချိုမှုအချက်ပြသည့် striatum အတွက် ERK activate လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2005; 102: 491-496 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vanderschuren LJ, Kalivas PW ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာအတွက် ALTER: preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology (Berl) 2000; 151: 99-120 ။ [PubMed]
JG, Coolen LM Veening ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါအာရုံကြော activation ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1998; 92: 181-193 ။ [PubMed]
Whitelaw RB, Markou တစ်ဦးက, Robbins TW, Everitt BJ ။ အဆိုပါ basolateral amygdala ၏ Excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြည့်တဲ့ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများဝယ်ယူအယှက်။ Psychopharmacology ။ 1996; 127: 213-224 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ စွဲလမ်း၏ Neurobiology ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 1996; 6: 243-251 ။ [PubMed]